Ciidamo Amisom oo La geynayo Dhuusa mareeb
Wararka aan ka heleyno magaalada Dhuusomareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi ay ku wajahan yihiin ciidamo ka socdo AMISOM. Ciidamada ayaa waxay xaqiijin doonaan amaanka magaalada Dhuusomareeb ee gobolka Galgaduud, oo la filayo inay tagaan wafdiga uu hogaaminayo...
Wararka ka imaanay Deeganka Qooqani ee ka tirsan Gobolka Jubada hoose ayaa sheegaybin xalay deegankaas ay ka dhaceen Duqeymo ay gesteen Diyaarada Dagaalo kuwaa Madaafic aad u tira badan ku duqeeyaay Gudaha Magaalada . Deeganka Qooqani oo dhaca Meel u dhaw xuduuda kenya iyo...
Wadaada halboolaha ah ee iskunxirta Muqdishao iyo Gobolada dalka ee si amrta Afgoi ayaa maanta xiran iyadoo ay ka socdaan baanan baxyo waaweyn oo ay dhigayaan Gaadidleyda iyo dadweyne ad u tira badan kuwaasa ka cawanaayo jidgooyooyin lasoo dhigay wadaadas. Gudomiyaha...
Faafahin dheerad ah ayaa ksoo baxeesa qarax xoogana oo xalay ka dhacay guri ku yaalo Xafad ka tirsan Degmada Kaaran ee Gobolak Baandir. Afahayeen u hadlay waraada amniga qaranka aya warbaahinta u sheegay saakay in laamaha Amniag ay gacanta kusoo dhigeen qof dhaawc kaaso ay...
Gudoomiya gudiga madaxa banaan ee Doorashooyinka Xalima Ismaacil xaliima yarey Ayaa Saakay sheegtay in dhawaan ay buuxin doonaan kuraasta ka dhiman Barlamaanka federalka soomaliya Xaliima Yarey ayaa sheegtay in Maalinta axada ee soo socota ay kulan yeelaan dooba Gudiga taaso goan...